2019-03-25 - ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ - Myanmar Law Center
You are here: Myanmar Law Center / 2016 - Today (NLD) / 2019-03-25 - ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
2019-03-25 - ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ
Created on Thursday, 28 March 2019 03:54
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၀ ။)
၁။ ဤဥပဒေကို ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ၂။ ရာဇသတ်ကြီးတွင် ပယ်ဖျက်ထားသော ပုဒ်မ ၁၅ ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည် -
“15. "Imprisonment for life" means imprisonment passed onaconvicted person to serve in the prison until death.”
၃။ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၅၃ ၌ ပယ်ဖျက်ထားသော ဒုတိယတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရမည်
"Secondly.-- Imprisonment for life;"
၄။ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၇၆ ကို အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် -
(1) Whoever commits rape except the offences of rape contained in sub-sections Punishments (2) and (3), shall be punished with imprisonment foraterm of twenty years, or with imprisonment of either description foraterm which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
(2) Whoever commits rape againstawoman who is his own wife and is not under twelve years of age, shall be punished with imprisonment of either description foraterm which may extend to two years, or with fine, or with both.
(3) Whoever commits rape againstawoman who is under twelve years of age shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment foraterm of twenty years." for rape.